ỊDEBANYE AHA NA ENYEMAKA KỌMPUTA N'EFU NYE NDỊ DEBANYERE AHA - ISIOKWU - 2019
M ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị denye aha na akwụkwọ ọhụrụ nke ihe ọhụrụ site na saịtị remontka.pro. Agaghị m ezitere ihe nkwado, ọ dịghị ma e wezụga isiokwu metụtara kọmputa na-ebipụta na saịtị m.
Nhọrọ ndebanye aha
Debanye aha site na E-mail
Debanye aha ọhụrụ, mgbe ụfọdụ na-adọrọ mmasị na bara uru, ihe si na saịtị remontka.pro. Ọ dịghị mgbasa ozi na enyemaka kọmputa n'efu nyere ndị debanyere aha ha n'aka.
Onye ọ bụla nke na-edeba akwụkwọ ozi E-mail ga-enweta ozi kọntaktị (ị nwere ike idegara m naanị na E-mail ebe ị natara akwụkwọ nkesa) maka nkwurịta okwu ozugbo na onye edemede na ịnataenyemaka kọmputa n'efu na oge ọ bụla mgbe mkpa bilitere. Maka izere nghọtahie: M na-enye ozi n'efu gbasara ihe ị ga-eme na ndụmọdụ. Enweghị m enyemaka site na njikọ dịpụrụ adịpụ na kọmputa, mkparịta ụka ekwentị ma ọ bụ ụzọ ndị yiri ya.